Nke a bụ isi ndu banyere otú ịzụta tiketi maka ịlụso oké ehi ọgụ , mgbe anyị 30 afọ ahụmahụ. Ndị a bụ ugboro ugboro jụrụ ajụjụ ( FAQ )
1. Wich bụ ụzọ kasị mma ka akwụkwọ m tiketi maka a ogu egbe ?
Ụzọ kasị mma bụ ntinye akwụkwọ tiketi na anyị, izu ụfọdụ ma ọ bụ ụfọdụ ọnwa tupu agha. The tiketi ga- eche gị na Teyci's ụlọ ọrụ otu ụbọchị nke ogu egbe , site 11:00 AM rue mmalite nke agha.
2. Ihe ndị m na tiketi ọnụ?
Tiketi niile na- numerated , e nwere kenyere oche. Tiketi niile ntinye akwụkwọ na otu iji akara bụ mgbe niile ọnụ. Ọ bụrụ na ị nwere ike họrọ , n'ihi na exemple , 20 tiketi na otu ahịrị , 20 tiketi ga- ọnụ. Ọ bụrụ na ị akwụkwọ 20 tiketi separatelly , ha nwere ike ịbụ ọnụ ma ọ bụ.
3. Gịnị ka " Sombra ", " Sol ", " Sol / Sombra " na Tendido pụtara?
Sombra pụtara Ikebe , Sol pụtara Anwụ na-acha Section, Sol / Sombra bụ obere akụkụ nke bullring , ọkara na Sun , ọkara na Ikebe. Tendido bụ aha kacha adabara ahịrị (na-adabere bullring , site Ahịrị 1 na ahiri 10 ma ọ bụ 20 ma ọ bụ karịa ).
4. Ọtụtụ n'ime ndị ịlụ ọgụ na-amalite mgbe 19:00 PM . M Kwesịrị akwụkwọ tiketi anwụ na-acha ngalaba ?
Anyanwụ e kpo oku na tendidos maka ụbọchị dum . Si na May ka August , ị nwere ike ịbụ na anwụ na-acha ngalaba na 40º ma ọ bụ karịa . N'ihi na ụmụ ma ọ bụ agadi ndị mmadụ, booking tiketi ke ndo ( sombra ) ukwuu tụrụ aro.
5. È nwere Ukwuu tiketi?
Ee, ha na-akpọ Barreras ( Ahịrị nke ihu ), Contrabarreras (Nke abụọ Ahịrị nke ihu ), na Delanteras Bajas (atọ Ahịrị nke ihu ). Biko don't tụlee tiketi na Sol dị ka Ndị Ukwuu tiketi . Ha na-adịghị .
6. Olee mgbe oge amalite na Spain ?
The n'oge amalite ke ufọt ufọt March na-agwụ ke ufọt ufọt October.
7. Kedu oge na ịlụso oké ehi ọgụ -amalite?
Mmalite nke a ogu egbe kpebisiri ike site awa nke ìhè anyanwụ, na -egosi na ndị Plaza izu ụfọdụ tupu onye ọ bụla festivity . Nọmalị, ịlụso oké ehi ọgụ amalite na 17:00 na March, nke nta nke nta na-amalite mgbe e mesịrị , ruo 19:00 na okpomọkụ, na maliterela gburugburu 17:30 na n'oge mgbụsị akwụkwọ .
8. Gịnị bụ a " novillada " ma ọ bụ " corrida de novillos "?
A novillada ma ọ bụ corrida de novillos bụ a ọzụzụ agha, a ogu egbe n'etiti ụmụ oké ehi na matadors akabeghi aghọ ruru eru nke ọma . Ndị ahịa bụ mkpokọta ọkara nke ndị maka nkịtị ịlụso oké ehi ọgụ . Na Madrid ha ka kpalie a otutu obi ụtọ. Ọ bụrụ na ị arenot maara na ịlụso oké ehi ọgụ , ị willnot ịhụ ọdịiche dị .
9. Pụrụ ụmụ ịga ogu egbe ?
Ee, ogologo oge dị ka ha na- esonyere ndị okenye. E nweghị ndị na pụrụ iche ahịa maka ụmụaka.
10. Olee ogologo otú a ogu egbe -adịgide adịgide?
A ogu egbe nwere ike ịdịru site na otu na ọkara ka abụọ na ọkara awa ( 1 ½ - 2 ½ awa) .
11. Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na Mmiri na-ezo ?
The ogu egbe nwere ike ka na-ebe ọ bụrụ na ọ Mmiri na-ezo . Naanị na ikpe nke ike, persistent mmiri ozuzo ọ ga- ịkagbu. Ọ bụrụ na ọ na-kwụsịtụrụ tupu mmalite nke na ụbọchị ogu egbe , ahịa ga mgbe niile ka a nkwụghachi nke tiketi price na nwoke ọnọdụ, mere site n'ido tiketi kpọmkwem na bullring . Ọ bụrụ na ha kwụsịtụ na ogu egbe mgbe ọ na-ama malitere (ọbụna ma ọ bụrụ na naanị otu oké ehi e agha ), e nweghị ekwe omume nke a nkwụghachi. Erughị a 1% nke ịlụso oké ehi ọgụ na- kwụsịtụrụ n'ihi mmiri ozuzo .
12. Enwere m ike tinye mgbe ogu egbe esesịn malitere ?
Ee, ma nanị n'oge etiti oge n'etiti oké ehi
13. Enwere m ike ịse foto?
Ee, e nwere ndị mba -agaghị emeli na foto.
14. Olee otú ọtụtụ n'ọdịnihu kwesịrị tiketi zụrụ ?
The n'ihu na tupu ị zụrụ gị tiketi , nke ukwuu -ekwe omume n'ihi ị na-ahọrọ ndị kasị mma oche.
akpaghị aka sụgharịrị